Rafael Caunedo. Ajụjụ ọnụ nke odee nke Ọchịchọ maka Mberede | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto: Rafael Caunedo. Nkọwa Facebook.
A Raphael Caunedo M zutere ya n'onwe ya dị ka onye nduzi na nzukọ ndị na-agụ akwụkwọ nke Ámbito Cultural haziri iji kparịta ụka Sunday Villar. Mgbe ahụ, achọpụtara m ya. Na mbido onwa a o weputara akwukwo ohuru ya, Ọchịchọ maka ihe ọghọm. Achọrọ m ikele gị maka obiọma gị na oge ị raara nye nke a Ajụjụ ọnụ ebe ọ na-agwa anyị banyere ya na banyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
AKITKỌ AKITKỌ: Ọchịchọ maka ihe ọghọm obu akwukwo ohuru gi. Kedu ihe ị gwara anyị maka ya na ebe echiche a siri?
RAFAEL CAUNEDO: Dị ka mgbe niile, echiche na-abịa site na ịjụ gị ajụjụ. Otu ụbọchị, na mberede, m hụrụ Nwata nwanyi nke ahụ bụ akụkụ nke otu nke ọgba aghara. Ha si ọrụ, ndị nche ha ka na-aga n'ihu, uwe ha nke ntụ ọka na àkwá na-acha ọcha - achọghị m ịkọwa ihe kpatara ya - ma chee ọnọdụ ihu. Mgbe m lere ya anya, echere m echiche: Ọ ga-amụ ụmụ? Nwa ọhụrụ ọ ga-eche gị n ’ụlọ? N'ihi ya, m kpebiri ịkpọrọ nwanyị ahụ n'eziokwu ma M tụgharịrị ya na Blanca Zárate. Na m na-atụ anya na na akụkọ ifo na ọ bụ nnọọ njọ.
RC: Eziokwu bụ na Naanị ihe m na-echeta bụ ihe ndị na-ahapụ m ụfọdụ ụdị huella. Aghaghị m ịnwe nhọrọ nchekwa. Anaghị m echeta akwụkwọ mbụ. M nwere n'uche na aha ndị gafere site n'aka m; ha bụ ncheta nke nwata nwere obi ụtọ. Ma ọ bụrụ na m ga-ekwu otúỌ bụ ya bụ akwụkwọ gbanwere omume ịgụ m, nke ahụ bụ Onye nwe anyi. N’ihi ọgụgụ ya, amalitere m ichekwa ego kwa izu iji zụta akwụkwọ. Ya mere wee rue taa. Enweghị m ike ịdị ndụ n’agụghị agụ; enweghị m ike ime ya na-enweghị ederede. Ọ na-amasịkarị m ime ya, mana enweghị m ike igosi ihe m. Njehie. Ihe niile gbanwere ụbọchị m so otu enyi m gaa ebe a na-ede ihe. N'etiti mmanya na akụkụ nke croquettes na omelettes anyị na-agụ akụkọ anyị. Na mberede, edere m maka ndị ọzọ, ọ bụghị maka onwe m, nke ahụ gbanwere ihe niile.
RC: Enwere m mmasị na ha nke ukwuu. Agụrụ m ihe niile. Echere m na m na-ahọrọ dịka ọnọdụ mmetụta uche nke m hụrụ onwe m. Akwụkwọ ọ bụla, ma ọ bụ onye ọ bụla na-ede akwụkwọ, nwere oge ya. Achọrọ m ịchọpụta ndị edemede ọhụrụ, Ana m ekwe ka ndị na-ere akwụkwọ na amamihe m zụọ m, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ dị onye ode akwụkwọ, mgbe m chọpụtara ya, mere ka m chee na m ga-abụ onye edemede. Enwere m mmasị n'akwụkwọ ya na onwe ya, enigma ya, ndụ ya dị iche iche, ụdị mmadụ ya. Agụrụ ya Ugochukwu Nwankwo ma gbanwee echiche m banyere akwụkwọ.
RC: Nye onye ọ bụla, mgbe m kesịrị tebụl na ákwà mgbochi n'oge nri abalị, achọrọ m ikwugharị. Ọ bụghị ọtụtụ ndị nwere ike ịnwụ karịa otu nri abalị.
RC: Achọghị m ịma ụda, ma ọ bụ egwu, enwere m ike ide ebe ọ bụla. Enwere m ụlọ ọrụ ahụ ịbanye na ụwa m, ọ bụrụgodị na m nọ na cafe nke ndị mmadụ gbara gburugburu. Naanị ihe m na-anaghị akwụli ọtọ bụ na mụ na onye ọzọ kparịta ụka n'ọnụ ụzọ nke ọzọ. Ekwusiri m ike, Achọghị m ịma maka mkpọtụ ahụ, mkpọtụ ahụ, mana enweghị m ike ide ihe ozugbo m matara mkpụrụ okwu metụtara ihe ọ pụtara.
RC: M si ụtụtụ biorhythms. Uche m na-esikwu ike n’ụtụtụ. N’ụzọ na-adọrọ mmasị, ụtụtụ na-adị mma maka ịgụ ihe. Ebe ahụ? Obi, Enweghị m ebe ọ bụla. Enwere m ike ide dabere na ogwe osisi, n'okpuru okwu mgbago n'akụkụ osimiri, ma ọ bụ na cafe nwere jazz n'azụ. N’ụlọ m, m na-eme ya ebe ọ bụla. O zuola na o dighi onye ozo n’akuku m na-ekwu okwu.
RC: Agụrụ m site na mkpali. Achọrọ m akwụkwọ site na ụlọ ahịa akwụkwọ, ana m agbagharị gburugburu ọtụtụ, na enwere akwụkwọ na-agba m izu mgbe niile, "Ọ bụ m." Ma m na-azụ ya. Ọ na-emetụta ederede dị na azụ azụ, mkpuchi, na ahịrịokwu na-enweghị usoro nke ohere na-ewe m.
RC: Ugbu a ka m nọ Hamnetnke Maggie O´Farrell dere.
M na-etinye aka na atụmatụ nke m na-ahọrọ ịghara ịkọ ihe ọ bụla ruo mgbe a kọwakwuru ya. N'ezie, m na-ekwe nkwa na protagonist ga-ebe ọ na-ekwesịghị.
RC: Nkọwapụta, Spain bụ otu n’ime mba ebe a kacha ebipụta ya n’ụwa niile. O na emegide ndepụta ọgụgụ Oké osimiri ala karịa nkezi. Amaghị m ihe nsonaazụ a na-ewetara ndị mbipụta ya, mana ana m agwa gị na ọ bụrụ na anyị gụkwuo, ọ ga-akara anyị niile mma.
RC: Echeghị m na ọ na-ede ihe ọ bụla gbasara COVID, mkpọchi na ihe niile. Ọ naghị adị m ka ya. Fromwa site na mgbe gara aga tụụrụ m aro karị, ya mere M na-ede dị ka a ga - asị na ọ nweghị ihe merenụ n'ihi na ejiri m n'aka na ihe niile ga - agabiga na anyị ga-alaghachi na otu nsogbu dị ka mgbe niile, ma na-enweghị a nkpuchi ma ọ bụ na-elekọta mmadụ anya. Mmakụ na nsutu na-amasị m na nzukọ mbụ, n’ajụghị ma ị gbaa ọgwụ mgbochi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Rafael Caunedo. Ajụjụ ọnụ nke odee akwụkwọ nke ọchịchọ maka ihe ọghọm
Rosa Montero nke oma